အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထု.. အတွက်
ရှင်းသန့်ဝင်းဖန့် တဲ့ သူရဲကောင်း ရနံ့တွေနဲ့
လမ်းပြကြယ် တပွင့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဘိုး..ရယ်...
အလင်းအမှောင် ကွဲပြားခဲ့ရပါတယ် အဘိုး..ရယ်...
ငြိုမှောင်နေမယ့် ဆိုင်းစု ကောင်းကင်ကြီးနဲ့
လွတ်လပ်ခွင့်တွေနဲ့ အတူ အုပ်မိုးလို့.....။
(ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သူရဲကောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော သို့ သဒ္ဓါလှိုင်း၏ လွမ်းသူ့ ကဗျာခြင်း...)
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:01 PM 19 comments:
ကမ္ဘာမြေတစ်နေရာလေးမှာ အမှတ်တမဲ့အဖြစ် မှတ်မှတ်ရရ ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ အလွှာပါးလေးတစ်ချပ်..။
ဘယ်နေရာကနေ လာမှန်းမသိခဲ့တဲ့ အလွှာလေးတစ်ချပ်က နောက်ဆုံးဘယ်နေရာမှာများ အဆုံးသတ် ပျောက်ကွယ်မလဲ ဆိုတာလည်း သိမနေခဲ့ပါဘူး။ အဆုံးသတ်ရမယ့် နေရာလေးတစ်ခုနဲ့ အဆုံးသတ်မယ့် အချိန်ဆိုတာကိုသာ သိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်.. အဲဒီ အလွှာလေးရဲ့ သိမှုတစ်ချို့ကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်ချင်ပါရဲ့..။ အလွှာပါးလေးပေါ်မှာ ဘယ်လိုအရာတွေက နေရာယူထားကြမလဲ.
အဆုံးသတ်မသိတဲ့ အရာတစ်ခုနဲ့အတူ ဖြစ်တည်ခွင့် ရလာခဲ့တဲ့အခိုက် လက်ရှိ အလွှာပါးလေးရဲ့ နေထိုင်ခွင့်လေးကရော၊ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ဘာတွေခြွေချ ထားခဲ့မှာလဲ..၊ ဘာတွေချန်ထား ရစ်ခဲ့မှာလဲ..၊
အလွှာပါးလေးတစ်ချပ်ကြောင့် လောကလေးထဲမှာ ဘာတွေများ အခြေတိုးမြင့်မှာလဲ.. မပြောင်းလဲပဲ ရှိနေမလား. ပိုလို့ဆုတ်ယုတ်သွားလေမလား. အလွှာပါးလေးတစ်ချပ်ကြောင့် တခြားသော အရာတွေအတွက် ဝန်ပိလေးလံစေမှာလား၊ အလွှာပါးလေးရဲ့ တစ်နေရာစာအတွက် တစ်ခုသော အရာအတွက် ဘယ်လိုစိန်ခေါ်ခြင်းတွေပဲ ရှိနေပါစေလေ. အလွှာပါးလေးရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတစ်ချက်က အရာရာကိုကျော်လွှား အံတုနိုင်မယ့် မျှတမှုမရှိ ခက်ခဲတဲ့ အကျပ်အတည်း အမိုးတစ်ခုအောက်မှာ ဖြစ်နေပေမယ့် တန်ပြန်တိုးဝှေ့ပြီး အမှန်တရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖေါ်ထုတ်နေမယ့် သတ္တိတစ်ခု အလွှာပါးလေး တစ်ချပ်လုံးမှာ စီးဝင်နေမှာပါ။
ကောင်းခြင်းဆိုခြင်း ရောပြွန်းနေတယ်ဆိုတာ နိယာမသဘောတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် အလွှာလေးတစ်ချပ်ကတော့ ကောင်းခြင်းတွေပဲ အုပ်မိုးထားချင်ခဲ့တယ်၊ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့တွေ ထုံမွှမ်းပြီး အလှဆင်နေချင်တယ်၊ အလင်းရောင် ထိန်ငြီးနေတဲ့ လောကလေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးနေချင်တယ်၊ အလွှာလေးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဝတ်ရည်လေးတွေကို သောက်သုံးခွင့်ရစေချင်တယ်၊ ဝတ်ရည်လေးကြောင့် အင်အားတစ်ရပ် အဖြစ် ကြီးထွားပြီး တန်ပြန် အင်အားသစ်တွေ တိုးပွားစေချင်တယ်၊
အလွှာလေးတစ်ချပ်က သူလိုချင်တဲ့ အရာတွေကို စိတ်ထဲက တလိုက်ရုံနဲ့ အရာအားလုံး ဖြစ်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် အာလာဒင်ဆီမီးခွက်လေး တစ်လုံးကိုလည်း မျှော်လင့် တမ်းတ မိနေသေးတယ်။
ဘယ်ကနေလာမှန်းမသိ. ဘယ်နေရာကို သွားရမှန်းမသိ.. ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ ပျောက်ကွယ် သွားရမှန်းမသိ.. ဘယ်နေရာမှာ စွန့်လွှတ် လိုက်ရမှန်းမသိတဲ့ အလွှာလေးတစ်ချပ်က ကမ္ဘာ့မြေပြင် တစ်နေရာ လောကလေးထဲမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး မသိတဲ့အရာတွေကို သိအောင် ရှာဖွေဖို့တော့ မရှည်လျားတဲ့ ခရီးတစ်ခု ထွက်ဖို့ ပြင်နေရပြီ။။။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 4:10 PM 21 comments:
ကြိုးနှင့် ချည်သော... (လက်ဝဲ ရဲ့မွေးနေ့ကဗျာ)
အတွေးနဲ့ အသက်ဆက်သူများရဲ့ ရင်ဘတ်ကို
ဖွင့်ဟ လှပ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားမိသူ လေလား
သူမ သဘောထားကြီးထားတဲ့ လောကကြီးဟာ
သူမကို ပြန်ပြီး သဘောထားကြီးနေပြန်လေသလား
သူမနဲ့ အတူ တစ်လောကလုံးက
မီးအိမ်လေးတွေကို ဆွဲ........ လို့။
အို.... ကောင်းကင် တဲ့
အမှန်တရား/ ငြိမ်းချမ်းမှု/ စစ်မှန်မှု/.....
ရင်ထဲကနေ တောင်းဆုတွေ ပြုနေလေမလား
သစ္စာ ကို သူမ လက်ဖြန့် တောင်းနေရှာတာပါ
အို ကောင်းကင်.... တဲ့။
ယုံကြည်ရာ၊ စွဲလမ်းရာ၊ ရပ်တည်ရာ အတွက်
ကျွန်တော့် ကို ရပ်ပြ နေတယ်။
အမှန်တရား/ ငြိမ်းချမ်းမှု/ စစ်မှန်မှု/.....”
အံတုဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ ။
အမ သဒ္ဓါလှိုင်း မွေးနေ့ အတွက် အမှတ်တရ ကဗျာ
ဘလော့ဂါ ကဗျာဆရာ လက်ဝဲ ရဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရ ကဗျာလေးပါ။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:06 PM 10 comments:
အောင်မြင်ခြင်း နှင့် ရှုံးနိမ့်ခြင်း
လူတို့၏ သတ်မှတ်ချက် အတိုင်းအတာအရ အောင်မြင်သောသူ၊ ရှုံးနိမ့်သောသူ၊ များအဖြစ် လောကဇာတ်ခုံပေါ်တွင် အလှည့်ကျ နေရာပေးနေရပေသည်။ ဘဝတစ်ကွေ့၏ အလှည့်အပြောင်း၊ အချိန်နှင့် အခြေအနေ၊ ကြိုးစားမှု အနေအထား များနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းကသာ မပြောင်းလဲသော နိယာမတစ်ခု အရ အောင်မြင်မှုမှ ရှုံးနိမ့်မှု၊ ရှုံးနိမ့်မှု မှ အောင်မြင်မှု အဖြစ် အပြောင်းအလဲများကို အမြဲ ကြုံဆုံ နေရပေမည်။ အစဉ်သဖြင့် အောင်မြင်မှု မရှိနိုင်သလို ကျရှုံးခြင်းလည်း အစဉ် မရှိနိုင်ပေ။ ရှုံးနိမ့်မှုမှ အောင်မြင်မှု သို့ တက်လှမ်းရသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ခံစားချက်သည် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခံစားချက်ဖြစ်မည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်.။
အောင်မြင်မှု မှ ရှုံးနိမ့်မှု အဖြစ် လက်ခံရသည့်အခါတွင် ခံစားရမည့် ခံစားချက်သည် လူတစ်ဦးစီ၏ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု နှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်မှု တို့အလိုက် မတူညီစွာ ခံစား ရပေလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ရှုံးနိမ့်မှုကို အဘယ်လူသားကမျှ လွယ်လင့်တကူ လက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
တခါတရံ မည်မျှပင် ကြိုးစား အားထုတ်စေကာမူ ရှုံးနိမ့်ခြင်း များနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ ပို၍ဝမ်းနည်း နာကျင်ရပေသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်လာသည့်အခါ မိမိရှုံးနိမ့်ရသည့် အကြောင်းရင်းသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သလဲ ဆိုသည်ကို ပြန်လည် တွေးတောသင့်ပေသည်။
အစုအဖွဲ့အပေါင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမျိုးတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည့်အခါ ရှုံးနိမ့်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် နားလည်မှု၊ အချင်းချင်း အပေးအယူ မျှတမှု၊ တကိုယ်ကောင်းမဆန်မှု၊ တာဝန်သိမှုနှင့် တာဝန်ယူနိုင်မှု၊ တာဝန်ဆောင်နိုင်မှု၊ ဇွဲရှိမှု များ မည်မျှ လိုအပ်နေသလဲဟု သုံးသပ်ရပေမည်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် တခြားသော အစုအဖွဲ့အပေါ်တွင် အနိုင်ရလိုမှု မကြီးခြင်း၊ တဘက်သတ် အနိုင်မကျင့်ခြင်း၊ မျှတစွာ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံခြင်း၊ လေးစားမှုရှိခြင်း၊ များလည်း ရှိနေပါရဲ့လားဟု ဆန်းစစ်ရပေမည်။ ရှုံးနိမ့်မှု၏ ရလာဒ်ကို အသေအချာ ပိုင်းခြားစဉ်းစားသင့်ပေသည်။
မိမိနှင့်အတူ အဖွဲ့အပေါင်းတစ်ခု၏ အောင်မြင်ခြင်းသည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အောင်မြင်မှု ဖြစ်ရပေမည်။ ရှုံးနိမ့်သည့်အခါတွင်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ရှုံးနိမ့်မှု ဖြစ်ရပေမည်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ရှုံးနိမ့်မှုတစ်ခုသည် ရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်သော်လည်း လေးစားစရာကောင်းပြီး လှပသက်ဝင်နေလိမ့်မည်။
တစ်ဦးချင်းယှဉ်ပြိုင်ရသည့် ပြိုင်ပွဲမျိုးတွင် ရှုံးနိမ့်သည့်အခါ မိမိ၏ လိုအပ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားခွင့် ရှိပေသည်။ အပြုသဘောဆောင်သည့် ဝေဖန်မှုမျိုးကို လက်ခံရပေမည်။ ထိုအခါ လိုအပ်သည့် အရာကို မှန်မှန်ကန်ကန် သဘောပေါက် သိရှိ၍ ပြန်လည်ပြုပြင် ကြိုးစားပြီး အောင်မြင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါမည်။ ထိုအောင်မြင်မှုကိုလည်း ဆက်လက်တည်တံ့နေစေရန် အစဉ်ကြိုးစားနေရပေမည်။ လောကသဘောတရားအရ အစဉ်အမြဲ အောင်မြင်ခြင်း၊ အစဉ်အမြဲ ရှုံးနိမ့်ခြင်း မရှိသော်လည်း မည်သူမဆို အောင်မြင်ခြင်း ဆိုသည်ကို နှစ်သက်သဖြင့် အောင်မြင်မှုရရန် တစိုက်မတ်မတ် အားထုတ်နေရပေလိမ့်မည်။
ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို စတင်ယှဉ်ပြိုင်ရသည့် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါမျိုးတွင်လည်း အတွေ့အကြုံ မရင့်ကျက်သေးသဖြင့် အောင်မြင်မှုကို လက်ခံ နိုင်သော်လည်း ရှုံးနိမ့်မှုကို လက်ခံနိုင်ရန် ခက်ခဲပေသည်။ ထိုသို့ ရှုံးနိမ့်လာလျှင် ရှုံးနိမ့်မှုကို လက်ခံနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။ ရှုံးနိမ့်ခြင်း၏ လက္ခဏာအဖြစ် တစ်ချို့သောသူ၏ မျက်ရည်စက်များ၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်စကားလုံးများ၊ ကို သတိထားပြုပြင်သင့်သည်။ ထိုရှုံးနိမ့်မှုမှ သင်ခန်းစာကောင်းများ ရယူတတ်ရန်သာ အရေးကြီးလှပေသည်။ ထိုသင်ခန်းစာသည် ဘဝတစ်ခု၏ ပြိုင်ပွဲတိုင်းတွင် အသုံးဝင်မည့် လက်နက်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်၊ မျှမျှတတ၊ ဖြူစင်မှုနှင့် တရားသော လက်နက်ဖြစ်ရပေမည်။
အောင်မြင်ခဲ့လျှင်လည်း ထိုအောင်မြင်မှုတွင် မိန်းမောမနေပဲ အောင်မြင်မှု၏အကြောင်းရင်းသည် ပြိုင်ပွဲတိုင်းတွင် အောင်မြင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ခြေလှမ်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်ဟု နှလုံးသွင်း ထားရပေမည်။ အောင်မြင်မှု၏ အကြောင်းရင်းကို အချိန်နှင့်အမျှ သင်ကြားလေ့ကျင့်ရင်း ရှုံးနိမ့်မှုကို အကာအကွယ် ယူရပေမည်။
အောင်မြင်မှု၊ ရှုံးနိမ့်မှု တိုင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသော အကြောင်းရင်းများကို မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် သဘောပေါက် နားလည်စွာ ရှာဖွေနိုင်ပြီး၊ ထိုရှာဖွေမှုများထဲမှ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းနှင့် တရားမျှတစွာ ပြင်ဆင်လေ့လာနိုင်ပြီး၊ ဘဝတိုက်ပွဲများတွင်လည်း တပါးသူအပေါ်၊ တခြားသော ဝန်းကျင်တစ်ခုအပေါ် မထိခိုက်၊ မနာကျင်စေပဲ အကောင်းဆုံး အောင်မြင်မှုများ ပွေ့ပိုက် ထားနိုင်စေရန် မျှော်လင့်မိပါသည်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 11:43 AM 25 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:29 AM 18 comments:
မတ်လမှာ အမှတ်တရနေ့တွေ များခဲ့
မတ်လမှာ တချို့မျက်နှာတွေ စည်းနှောင်ခဲ့
မတ်လမှာ တချို့ ဝိညဉ်ပျောက်ခဲ့
မတ်လမှာ တချို့ အိမ်နဲ့ဝေးခဲ့
မတ်လမှာ တချို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့ ဝေးခဲ့
မတ်လမှာ တချို့ စာသင်ခုံနဲ့ ကျောခိုင်းခဲ့
မတ်လမှာ တချို့ ချစ်သူကို စွန့်လွှတ်ခဲ့
မတ်လမှာ တချို့ အိပ်မက်တွေ စတေးခံခဲ့
မတ်လမှာ တချို့ အရာတွေ ထားပစ်ရစ်ခဲ့
မတ်လမှာ တစ္ဆေတွေနဲ့ စီးချင်းထိုးခဲ့
နေ့တစ်နေ့အဖြစ် အရေခွံ လဲခံ ရခဲ့..။
မတ်လမှာ ရာဇဝင်တွေ ပြောင်းခဲ့သလို
မတ်လမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေနဲ့ ဝေးခဲ့သလို
မတ်လမှာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ ရေပြင်ကနေ
နီရဲလွန်းတဲ့ သတ္တိသွေးတွေ ပြနိုင်ခဲ့တယ်၊
မတ်လမှာ အနုပညာတွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့သလို
မတ်လမှာ အတောင်တွေ ချိုးခံခဲ့ရသလို
နူးညံ့တဲ့ လက်တွေ မာကျောခဲ့တယ်၊
မတ်လမှာ လွမ်းစရာ တနင့်တပိုးတွေ ထမ်းပိုးခဲ့ရသလို
ကဗျာချစ်သူတွေ ရင်ထဲကသံစဉ်တွေ လှစ်ဟပြကြ
ကဗျာချစ်သူတွေ ခံစားချက်ချင်း တူးဖေါ်ကြ
ကဗျာချစ်သူတွေ နှလုံးသားချင်း ဖလှယ်ကြ
ကဗျာချစ်သူတွေ စိတ်ကိုစိတ်ချင်း ထပ်ကြ
ဝိညဉ် ပူးကပ် နေခဲ့ကြတယ်။။
(မတ်လ ၂၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့လေးအတွက် အမှတ်တရ ရေးဖွဲ့ပါသည်။)
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:12 PM 18 comments:
ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ဘလော့ဂ်ဂါတို့အမြင်(တဂ် ပို့စ်)
ဘလော့ဂါ သက်တန့်နဲ့ ညီမငယ် မဒမ်ကိုးတို့ တဂ်ထားတဲ့ ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ဘလော့ဂ်ဂါတို့အမြင်မှာ ပြောပြခွင့်ရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Sim Card (ဆင်းမ်ကဒ်) တန်ဖိုးကိုပြောတာလို့ သဘောပေါက်မိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဆင်းမ်ကဒ်တစ်ခုရဲ့ တန်ဖိုးက အဲလောက်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက် နှစ်သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းကို တန်ဖိုးနည်းဖုန်းလို့ မမြင်မိပါဘူး။ ဖုန်းအလုံးကတော့ ကောင်းရင်ကောင်းသလို တန်ဖိုးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ အတွက် သင့်တော်သလို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆင်းမ်ကဒ်ကို နှစ်သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ ဝယ်ရတာဆိုရင် တန်ဖိုးအရမ်း ကြီးလွန်းနေပါတယ်။
စနစ်ကျ စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဦးဆောင်မှုကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့အတူ လက်တွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် အများပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိမယ့် အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
၃ ။ ငါးထောင်တန်ဖုန်း ပေါ်လာစေဖို့ စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး လွှတ်တော်ကို တင်ပြခြင်းအပေါ် သင်ဘယ် လိုမြင်မိ ပါသလဲ ။
တရားမျှတမှုရှိဖို့ အဓိကကျပါတယ်။ လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ တရားမျှတဖို့၊ လေးစားရမယ့် ဥပဒေကို လေးစားဖို့၊ လူလူချင်း တန်ဖိုးထားဖို့၊ လူသားတစ်ဦးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်တတ်ဖို့၊ လူတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အရေးကို လေးစား လိုက်နာတတ်မယ်ဆိုရင် မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလို ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကသာ မျှတမှုရှိတဲ့ ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဆောက်တည်ပြီး လူသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ပြည်သူအားလုံးတန်းတူညီမျှ တယ်လီဖုန်း အသုံးပြုနိုင်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူး အိပ်မက်လေးနဲ့တင် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီး ငါးထောင်တန်ဖုန်းများ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာ၊ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက် ကောင်းမွန် လျင်မြန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ လူသားတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေဖို့၊ ပြားလာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ လူသားတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အနီးကပ်ဆုံး ခင်မင်နိုင်ပြီး အလွမ်းပြေစေနိုင်ဖို့၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် သိလာဖို့၊ သတင်း အချက်အလက်တွေကို မျှဝေဖို့၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ရုတ်တရက် ကျရောက်လာမယ့် ဘေးအန္တရာယ်တွေကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ဖို့၊ အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေအချိန်မှာ အလျင်အမြန် ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့၊ သေရေးရှင်ရေးတမျှ ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးလာခဲ့ရင် ဆက်သွယ်ဖို့၊ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာတဖြစ်လဲ တယ်လီဖုန်းကို အသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်တဲ့အခါ အရည်အသွေးပြည့်မှီပြီး အမြဲတမ်း ဖုန်းလိုင်းကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှလည်း စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်မှာပါ။ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာ တယ်လီဖုန်းကို မတန်တဆ ဈေးနှုန်းမြှင့်ထားလို့ လူတန်းစားခွဲခြားထားပြီး အရေအတွက် နည်းလွန်းလှတဲ့ လူဦးရေလောက်သာ ကိုင်နိုင်တဲ့အတွက် ဆင်းမ်ကဒ်တစ်ခုရဲ့ တန်ဖိုး ငါးထောင်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာမှာ လူတိုင်းကိုင်နိုင်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကို မိမိတို့ တိုင်းပြည်မှာရှိကြတဲ့ ပြည်သူတွေလည်း အသုံးပြုနိုင်လာမှာကို တွေးမြင်မိပါတယ်။
ငါးထောင်တန်ဖုန်းများ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူ အားလုံးကို လေးစားရင်း၊ ဖုန်းလိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ လက်ထဲကတဆင့် နှလုံးသားများ ပြုံးပျော်နိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:33 PM 20 comments:
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ နှလုံးသားတွေ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ လူသားများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ လင်းရောင်ခြည်များ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ကာလရွေ့လျားမှုများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ဖုံးလွှမ်းခံလိုက်ရတဲ့ အပြင်းစားမှိုင်းတိုက်မှုများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ တိုက်စားခံလိုက်ရတဲ့ သစ္စာတရားများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ လုယူခံလိုက်ရတဲ့ မေတ္တာတရားများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့ မျှော်လင့်ချက်များ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ လဲဖြိုခံလိုက်တဲ့ အမှန်တရားများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ မျက်နှာဖုံးစွပ် မင်းသားများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ဒယီးဒယိုင် လျှောက်လဲချက်များ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ကူးလူးနေကြတဲ့ မျက်နှာတုများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ မေ့နေကြတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ကြတဲ့ ဒုက္ခများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ဟန်ဆောင်နေကြ အပြုံးလေးများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ အသံတိတ် သက်ပြင်းချသံများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ လိုင်စင်မဲ့ လူသားများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ဖက်တွယ်ထားမိရက်သား အတ္တလူသားများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ရမ်းကားနေကြ လက်ညှိုးများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ရယ်မောချင်စရာ ပြက်လုံးများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ အရောင်ပြောင်း သစ်ငုတ်များ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ လွမ်းဆွတ်ဖွယ် အမည်နာမများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ကတိကဝတ်များ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ နာကျင်ဖွယ် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ခေါင်းပါးလွန်းတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ဆန့်ကျင်ဘက် တုံ့ပြန်မှုများ
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ပူလောင်မှုတွေပေးခဲ့တဲ့ လိုချင်မှုများ.. နဲ့
မြို့ပျက်ညတွေထဲမှာ ကျမရဲ့ အသည်းနှလုံး လုံးပါးပါးခဲ့တယ်။
ယုံကြည်ချက် ခိုင်မာတဲ့ လက်တစ်စုံ
ကမ္ဘာကြီးကို လှုပ်နှိုးခဲ့တဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့မျက်နှာလေး
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:04 PM 18 comments:
လူတယောက်ဟာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေဖို့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ သူစပြီးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ သူ့ရွာရဲ့အပြင်ဘက်က သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်နေတာကို တွေ့ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်က ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို အမှန်တရားနဲ့ သစ္စာတရားရှိတဲ့သူကို ရှာဖွေနေတာလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုလူမျိုးတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ပြောပြပေးဖို့ တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အချက်လေးက သိပ်ကို ရိုးရှင်းလှပါတယ်။" ဒီလိုမျိုး သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်နေတဲ့သူမျိုး၊ ဒီလို ဟန်ပန်အနေအထားရှိတဲ့သူမျိုး၊ ဒီလိုအမူအယာမျိုး ရှိတဲ့သူမျိုး"ပေ့ါ၊ အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက မင်းရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါပဲ။
ရှာဖွေမယ့် ကျွန်ုပ်ဟာ စပြီးထွက်ခွါလာခဲ့ပါတယ်။ နေရာအနှံ့လျှောက်သွားနေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော် ကြာခဲ့တယ်။ သူဟာ နေရာပေါင်းစုံရောက်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် သူတွေ့ဆုံချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။
သစ္စာရှိသည်ဟု ဆိုသူများကိုတွေ့ခဲ့ပြီး မည်သူတဦးတယောက်မျှ သစ္စာတရားရှိသူများ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ အလွန်အမင်း မောပန်းနွမ်းနယ်ပြီး နေရပ်ကိုပြန်လာခဲ့တော့တယ်။
သူပြန်လာတဲ့အခါ အလားတူသစ်ပင်အောင်မှာ ထိုင်နေတဲ့ အဖိုးအိုကိုတွေ့လို့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အံ့အားသင့်ခဲ့ပါတယ်။ "သူပြောတဲ့အတိုင်း သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်နေတယ်၊ သူ့ရဲ့ ဟန်ပန်အနေအထားကလည်း သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလား"။ "လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်က ဒီလို ထိုင်နေခဲ့တယ်၊ ကျွန်ုပ်မျက်လုံး ကွယ်နေလို့လား" သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ သူ့ရဲ့အမူအယာတွေကို အရင်အတိုင်း တွေ့ရတယ်။
"ပထမစတွေ့ခဲ့တုန်းက ဘာဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်ကို မပြောခဲ့တာလဲ"
"နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက် ဘာဖြစ်လို့ လမ်းမှားကို ပို့လိုက်ရတာလဲ"
"အမှန်တရားနဲ့ သစ္စာတရားရှိတဲ့သူလို့ ဘာဖြစ်လို့ မပြောတာလဲ" လို့ ပြောတော့ အဖိုးအိုက "မင်းနားလည်သဘောပေါက်မှာ မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲလို့" ပြောခဲ့တယ်။
"ဝေးလံတဲ့နေရာကို လျှောက်မသွားပဲ မင်းအိမ်ကို ပြန်လာဖို့ စိတ်ကူးမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့နေရာကို ရောက်လာဖို့အတွက် နေရာပေါင်းများစွာကို သွားခဲ့ပြီးပြီ၊ မင်းပြန်လာမှ ဒီလိုအပင်အောက်မှာ အစခပ်သိမ်းရှိတယ်လို့" ပြောခဲ့တယ်။ "ငါထိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးပေ့ါ၊ ဒါပေမယ့် မင်းစိတ်တွေက ဆန္ဒစောလွန်းတယ်၊ မင်းနားမထောင်ဘူး၊ မင်းရေးကြီးသုတ်ပြာ အလောတကြီး လုပ်ခဲ့တယ်"။
"မင်းဟာ သစ္စာတရားရှိတဲ့သူကို ရှာဖွေဖို့အတွက် နေရာတကာကို သွားခဲ့တယ်။ မင်းအတွက် ရှာဖွေတာက အရေးကြီးနေတယ်၊ အမှန်တရားက အရေးမကြီးခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းဘာဖြစ်လို့ ပြန်လာတာလဲကွာ! ငါပင်ပန်းလှပြီ၊ မင်းအတွက် ဒီပုံစံအတိုင်း အဆက်မပြတ် ထိုင်နေခဲ့တာ အတော် ပင်ပန်းနေခဲ့ပြီ"
"မင်းဟာ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက် လျှောက်သွားခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့် သစ်ပင်အောက်မှာ ငါထိုင်နေတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားနေမိလိမ့်မယ်၊ မင်းတနေ့ ဒီနေရာကို ပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင် မင်းဘာလုပ်မလဲ၊ ငါမင်းကိုစောင့်နေခဲ့တယ်၊ မင်းပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီ၊ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက် လျှောက်သွားခဲ့ရပြီးပြီ၊ ဒါဟာ မင်းရဲ့ အမှားပဲ၊ သစ္စာရှိတယ်ဆိုတဲ့ သူဟာ ဒီမှာပါပဲကွာ"
"ငါတို့ဟာ ငါတို့နားမှာဘာရှိလဲ၊ ငါတို့ဘေးမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာ မမြင်နိုင်တာ ငါတို့ဘဝမှာ အကြိမ်ပေါင်း များစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဟိုးအဝေးက သာယာတဲ့အသံလေးက ငါတို့ကို ဆွဲဆောင်တယ်၊ ဝေးလံတဲ့ စိတ်ကူး၊ အိပ်မက်တွေက ငါတို့ကို ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်၊"
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ ကြိုးစားပါ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို သိအောင်ကြိုးစားပါ၊ မင်းဟာ မင်းရဲ့စိတ်အတွင်းမှာ သစ္စာတရားရှိတယ်ဆိုတာကို မင်းကိုယ်မင်း မယုံကြည်ခဲ့ဘူး။
www.funzug.com မှ Try to believe in yourself ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:40 AM 25 comments:
ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ဘလော့ဂ်ဂါတို့အမြင်(တဂ် ပို့စ်...